Vaovao - fampidirana lamba sy fivoarana amin'ny lamba vita amin'ny karbaona
Lamba fibre karbaona fantatra ihany koa amin'ny lamba fibre karbaona, lamba fibre karbaona, lamba tenona fibre karbaona, lamba prepre fibre karbonika, lamba nohamafisin'ny fibre carbon, lamba fibre carbon, tape tape carbon carbon, ravina fibre carbon (lamba prepreg), sns. karazana vokatra vita amin'ny fibre carbon unidirectional, matetika vita amin'ny fibre carbon 12K.
Hita amin'ny hatevin'ny roa: 0.111mm (200g) sy 0.167mm (300g) .Vari-haben'ny sakany: 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 500mm ary sakany manokana takian'ilay tetikasa. Miaraka amin'ny fivoaran'ny indostrian'ny CFRP, indostria sy orinasa marobe no nampihatra CFRP , ary misy orinasa sasany niditra tamin'ny indostrian'ny CFRP ary nivelatra.
Ny lamba fibre karbaona ampiasaina amin'ny firafitry ny fihenjanana, ny fanetezana ary ny fanamafisana ny seismika, ny fametahana lakaoly izay niara-namorona seta feno an'ity fitaovana ity ary nanjary fitaovana fitambaran'ny fibre karbonika, dia afaka mamorona tanteraka ny fahombiazan'ny fitaovana lamba vita amin'ny fibre karbonika hanatsarana ny rafitra, sahaza ho an'ny Ny fanodinana tranobe dia mampiasa fitomboan'ny enta-mavesatra, ny fiasan'ny injeniera ny fiovana amin'ny asany, ny fahanteran'ny fitaovana, ny tanjaky ny hery mivaingana dia ambany noho ny lanja famolavolana, ny fikolokoloana ny rafitra, ny fanamboarana ny serivisy amin'ny serivisy ary ny fiarovana ny injeniera fanamafisana.
Fanovana ny endri-javatra
Ny tanjaka avo, ny hakitroka kely, ny hateviny manify, amin'ny ankapobeny dia tsy mampitombo ny fanamafisana ny lanjan'ny maty sy ny haben'ny fizarana. Mihatra amin'ny fanamafisana sy ny fanamboarana ireo karazana rafitra sy ny endrik'ireo tranobe, tetezana sy tonelina, fanamafisana aseismatika ary fanamafisana ny rafitra izany. Fanorenana mora, tsy mila milina sy fitaovana lehibe, tsy misy fandidiana mando, tsy mila afo, tsy mila fotodrafitrasa misy toerana, toerana kely noho ny fananganana fanjakana, fahombiazan'ny fananganana avo. Faharetana avo lenta, satria tsy harafesina, tena mety amin'ny tontolo iainana asidra, alkaly, sira ary korontana atmosfera.
Lamba fibre karbaona avo lenta
Izy io dia mety amin'ny fanamafisana sy fanamboarana ny karazana rafitra rehetra, toy ny andry, takelaka, tsanganana, tafo mitafo, seranana, tetezana, barika, akorandriaka sns. Mety amin'ny fanamafisana sy fanamafisana ny seismika amin'ny rafitra beton, firafitra sy hazo rafitra eo amin'ny sehatry ny seranan-tsambo, ny fiarovana ny rano ary ny injeniera amin'ny alàlan'ny famokarana herinaratra, indrindra ho an'ny fanamafisana ny firafitry ny velarana amboniny sy ny tonon-taolana. Ny tanjaky ny beton-base dia tsy latsaky ny C15. Ny mari-pana manodidina ny fananganana dia ao anatin'ny 5 ~ 35 ℃, ary ny haavon'ny hamandoana dia tsy tokony hihoatra ny 70%.
Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic, Lamba vita amin'ny acrylic Fiberglass, Fiberglass mifono akrilika, Lamba Fiberglass Aluminized, Clot Fiberglass, Lamba lamba vita amin'ny ravin-kazo vita amin'ny kofehy,